Fifidianana 2015, sedra ho an'ny firenena tan-dalàna | SEFAFI
Fifidianana 2015, sedra ho an'ny firenena tan-dalàna
Ny vola, hono, no hozatry ny ady. Marina loatra io fiteny io ho an’ny politika satria iaraha-mahita fa misy fiantraikany amin’ny isam-bato azony ny habetsaky ny vola kirakirain’ny kandidà amin’ny fotoam-pifidianana. Noho izany dia tsy maintsy dinihina lalina haingana ny lalàna mifehy ny famatsiam-bola eo amin’ny sehatra politika. Ny Lalàna 2011-012 tamin’ny 09 septambra 2011 mikasika ny antoko politika aloha dia efa mirakitra fepetra momba ny famatsiam-bolan’ny antoko. Tsy afaka ny tsy hiaiky isika fa tsy feno izy io ary tena tsy ahitam-bokany. Izay andininy vitsy dia vitsy mba mifandraika amin’izany aza moa mainka koa tsy milaza famaizana na iray aza.
Nikarakara seminera ny CSI ny 3 sy 4 jolay 20141 ary nandray anjara tamin’izany ny Komitim-Pirenena Mahaleo tena momba ny Fifidianana ho an’ny Tetezamita (CENI-T), ny Birao Mahaleo tena Miady amin’ny kolikoly (Bianco), ary ny Sampan-draharaha Miady amin’ny Famotsiam-bola (SAMIFIN), na koa ny ministeran’ny Fitsarana. Anisan’ny tanjona nambara ho nokendrena tamin’izany dia ny hahavitana mampandany ny lalàna mifehy ny famatsiam-bolan’ny antoko politika sy ny fampielezan-kevitra, araka ny voalazan’ny andininy 36 ao amin’ny lalàna 2011-012 (« ny fitantanana ny vola nomena (ny antoko politika) dia tsy maintsy manaja ny fitsipika mifehy ny fitantanana izay hofaritina amin’ny alalan’ny fitsipi-pifehezana ») na koa ny andininy 38 (« hisy fanamarinana ara-potoana hatao amin’ny fitantanana ny kaontin’ny antoko amin’ny alalan’ny fahefam-pitsarana ara-bola. Ny fampiharana an’io andininy io dia hazavaina ao amin’ny fitsipi-pifehezana »). Toa efa nisy fiheverana hanangana komitin’ny asa iombonan’ny andrim-panjakana. Indrisy anefa fa hatramin’izao dia tsy nisy zava-bita miharihary, na tsy nisy dingana vita. Tena tao marina ve ny finiavana hampandroso ny raharaha sa dia fihetsiketsehana fotsiny hatao tampi-maso ny olom-pirenena ?
Efa neken’ny Fivorian’ny Minisitra ny tolo-kevitry ny CENI-T ny amin’ny hanaovana ny fifidianana ny kaomina ny 17 jolay 2015, mazava loatra izany izao fa tsy maintsy atrehina sy vahana io olana momba ny famatsiana ara-bola io faran’izany haingana mba tsy ho lazany fotsiny ohatra ny vilian-tsahona.
Famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana sy ny antoko politika
Ny resaka momba ny fitsipiky ny famatsiam-bola dia matetika no tsy mikasika afa-tsy ny antoko politika. Nefa iaraha-mahita fa misy koa vondrona mandray anjara mavitrika amin’ny fampielezan-kevitra. Toy izany ny fikambanana sy ny fiarahan’ny mpanohana ary ny fivondronana samihafa mety handalo ihany nefa takian’ny zava-misy. Niarahan’ny rehetra nahita ny firoboron’ireny fivondronana nanohana ny kandidà izatsy na izaroa ireny tamin’ny fifidianana filoha sy solombavambahoaka tamin’ny 2013.
Ny tena tsinin’io lalàna io dia noho izy mampifantoka ny resaka famatsiam-bola amin’ny antoko politika fotsiny. Fantatry ny mpanao politika sy ny mpomba azy mandritra ny fampielezankevitra tsara izany. Ny Fitsipi-Pifidianana dia tsy mirakitra na dia andininy iray aza mikasika ny famatsiana ny fampielezankevitra afa-tsy ny fandrarana « ny fampiasana ny vola sy ny fitaovam-panjakana hanaovana fampielezan-kevitra » (and. 154). Ny lalàna mikasika ny antoko politika fotsiny no mba milaza fa « tokony hangarahara ny sanda, ny loharano ary ny fampiasana ny fanomezana, ny findramam-bola ary ny fanampiana avy any ivelany » (and. 37). Marina fa efa voararan’ny lalàna mazava ny antokom-pinoana sy ny fikambanana tsotra tsy hanao ny asan’ny antoko politika raha tsy izany dia ampiharina aminy ny fepetra raketin’ny lalàna mifehy azy, nefa dia lasan-ko vavany fotsiny izany raha ny fandehan-javatra vao tsy ela akory izay no jerena.
Hararaotin’ny kandidà io tsinin’ny lalàna io, matetika izy ireny no tsy avy amina antoko politika ka afaka mandray izao fanampiana rehetra izao ary tsy voatery hanao tatitra na amin’iza na iza. Antenaina fa ireo ankolafy politika lehibe toy ny HVM, ny MAPAR, ny TIM ary ireo vondrona politika samihafa mifandray aminy toy ny MDM, Arema, Monima, Avana, Antoko Maitso, MTS, Leader Fanilo, VPM-MMM, Hiaraka Isika sy FFF dia mba hanome ohatra tsara amin’ny fifidianana amin’ny taona 2015 ka hanara-dalàna mialoha ny fifidianana kaominaly ho avy. Fara faharatsiny, tokony hankatoavina ny fijoroany amin’ny fomba ofisialy ho antoko politika (satria mbola tsy izy rehetra akory no efa nankatoavina) ka hotakiana aminy araka izany ny fanajana ny lalàna mifehy ny antoko politika. Hindrahindraina ao amin’ny filazana ny antony namoronana ny lalàna momba ny antoko politika ny fanaovana politika amin’ny fomba matihanina, noho izany tsy maintsy asiana fepetra hentitra ny famatsiam-bola, tsy ny antoko politika fotsiny, fa indrindra indrindra ny fampielezankevitra. Izao dia efa tsy maintsy mankatoa izany rehefa mety ho kandidà mihambo ho manaja ny Fanjakana tan-dalàna avy ao amin’ireo vondrona.
Fahafahana manjohy ny famatsiam-bola ho an’ny politika
Ny lalàna 2011-012 ao amin’ny andininy 36 dia mitaky ny mangarahara ho an’ny tombam-bidy, ny fiaviana ary ny fampiasana ny vola nomena ny antoko politika anankiray.
Arakaraka ny hanindrahindrana ny fananganana Fanjakana tan-dalàna no tsy ahafaha-miala amin’ny tsy maintsy ahalalana izay namatsy vola. Tsy heloka ny manohana ara-bola ny antoko politika raha toa ka fiandaniana amin’ny hevitra ijoroany no mibaiko izany. Tsy izany anefa ny zava-misy satria dia misy olona nanohana olom-boafidy mahazo asa avy amin’ny fanjakana tsy misy mangarahara na ny fomba nahazoany azy ary na dia ny tombam-bidiny akory aza.
Ho fanombohana ny fahombiazana, ankoatra ny tsy maintsy hanokafana kaonty any amin’ny banky dia tsy maintsy arahi-maso sy hamarinina tsara ny loharano niavian’ny vola tafiditra ao amin’ny kaonty iray, miaraka amin’ny lisitry ny olona nandray anjara tamin’izany. Tokony ho takian’ny lalàm-pifidianana koa ny fanolorana tatitra ara-bola aorian’ny fotoam-pifidianana tsirairay amin’ny anaran’ny mangarahara. Anjarany koa ny mamantatra ny fetra farany ambony. Efa imbetsaka no niresahana an’io fetra farany ambony io, saingy tsy hita izay niafarany – fa nahoana àry ? Misy mpanao politika sasany midrinkina mafy manohitra an’io ary ny sasany kosa miray tetika aminy ihany ka tsy miteny tsy mivolana satria matahotra daholo izy rehetra sao hita miharihary eo ny fampiasam-bola miharo tetika maizimaizina saro-dazaina.
Io fetra farany ambony io dia manery ny antoko politika hiditra amin’ny tena resaka fa tsy hiafina any ambadiky ny fisehoana an-tsehatry ny mpanakanto. Fanajana ny hasin’ny olona koa izany. Hatao ahoana ny tsy ho rototra na ny hianona fotsiny amin’ny resaky ny mpitazana manoloana ny fandaniana tsy hita pesimpesenina ataon’ny mpanao politika mandritra ny fampielezan-kevitra, nefa aorian’izany dia tsy mitsahatra ny fameriberenana fa tsy manam-bola ny fanjakana hiandreketana sehatra faran’izay tena saro-pady indrindra ?
Ny lalàna 2011-012 dia manery ny antoko tsirairay hampiasa kaonty any amin’ny banky. Saingy hita tamin’ny fifidianana farany teo fa voafetra ihany ny fahefan’io lalàna io amin’ny fanombanana ny tombam-bidin’ny vola nomena, rehefa mikasika ny fanomezana tsy ara-bola. Voatantara tamin’ny antsipiriany ny momba ireo fiara 4X4 telonjato. Voalaza tamin’izany fa nohafaran’orinasa (tsy dia mazava loatra eo anatrehan’ny fadin-tseranana) ireo fiara ireo hanaovana fampielezankevitra ho an’ny kandidà iray. Taorian’ny fizotran’ny raharaha voatantara an-gazety tamin’ny antsipiriany dia re fa niseho ny « tompony » izay nanome azy ireo ho an’ny Fanjakana ! Tsy ho fantatra na oviana na oviana ny antonantony sy ny vokatr’io fanomezana io. Betsaka ny lahatsoratra naterak’io trangan-javatra mamohehatra io, saingy tsy nisy lesona na iray akory aza notsoahina avy amin’izany, toy ny tambin’ny fampiasam-bola. Izany no tokony hampahafantarana ny olona nanome ny fanampiana, na lelavola izany na zavatra hafa. Amin’ny ankapobeny, ny fampiasana ny volan’ny antoko politika dia ampiasaina hoentina hanonerana ny lany amin’ny fampandehanana ny raharaha sahanin’ny mpitantana azy, ny fikarohana sy ny fanatanterahana ny politika, ary ny famatsiana ny fampielezan-kevitra ho an’ny kandidà avy amin’ny antoko. Tokony hanaovana « taokaonty tsotsotra » atolotra « anaty tatitra momba ny toe-bola isan-taona » ireny fampiasana azy ireny (lalàna 2011-012, and. 38). Na dia mbola any ambanin’ny tahan’ny fahantrana aza ny ankamaroan’ny mponina, dia nahita maso ny fandaniana mihoa-pampana (fivezivezena tamin’ny helikopitera, fizarana tiserita sy tsy hita isa, ary zava-madinidinika samihafa, fampisehoana nidiram-potsiny, sns.) isika, izay nanakona tanteraka ny tena fototry ny olana eo amin’ny firenena. Indraindray ny fampielezan-kevitra dia naka endrika lanonana ara-javakanto fa tsy fifaninanana fandresen-dahatra velively hahazoana ny fahefana, mifototra amin’ny adihevitra momba ny hoavin’ny firenena. Ho an’ny kandidà sasany ny isa voalaza, tsy nohamarinina ary tsy nohamafisina, dia tafakatra any amin’ny tsy hita noanoa amin’ny vola vahiny. Ny hany azonay hamaranana azy dia ny filazana fa ny fampiasana ny famatsiam-bola ho an’ny fampielezankevitra dia natao ho ana tanjona tsy demokratika mihitsy ary misarika midina, mody ailikilika foana any amin’ny habadoan’ny vahoaka.
Velomina ny fanantenana Amin’izao fiandohan’ny taona izao, ao anatina tontolon’ny fampihavanana mareforefo na vonjy tavan’andro, ny SeFaFi dia manantena fa ny fifidianana amin’ny taona 2015 dia hararaotina hanatsarana ny fifanakalozana sy ny adihevitra politika mikasika ny hoavin’ny firenena, hanadiovana ny fomba hiakarana eo amin’ny fitondrana, ary hamelona tsirim-panantenana ho an’ny hoavy eo anivon’ny olom-pirenena. Tahaka ny vahoaka koa, ny SeFaFi dia kely finoana saingy tsy mety ho voafongotra hatramin’ny fakany ny fanantenana. Anjaran’ny Fitondrana sy ny fahefana mifandraika aminy, ny filazam-baovao sy ny fiarahamonim-pirenena, ny mitondra ny anjara birikiny amin’io ezaka iombonana hampisy fifidianana marina sy mangarahara, tsy hamela na holatry ny lolom-po, na fahatsapana tsy rariny, na halatra, na tsy fitoviana manoloana ny fifaninanana. Ny fanombohana izany dia ny mangarahara sy ny rariny eo amin’ny fitaovana ampiasaina, izany hoe ny fitoviany.
1 Seminera momba ny « Fitantanana fifidianana » DLC Anosy - 3 sy 4 jolay 2014.
Antananarivo, androany faha-10 Janoary 2015
Mifanaritaka ny fanjakana
Iza moa ny SeFaFi?
III R 45 ter Tsarafaritra, Tsimbazaza, Antananarivo 101, Madagasikara
+261 (0) 20 22 548 88